Iimuvi eziphambili ngokusekwe kwiincwadi: zithini i-TOP | Uncwadi lwangoku
Xa sicinga ngobugcisa bemiboniso bhanyabhanya, uninzi lwazo lunento yokwenza nenoveli okanye amabali aphefumlelweyo. Yiba ngumkhwa oqhubekayo wokuphinda ubugcisa besixhenxe, ukulungelelaniswa kwefilimu kweencwadi eziphumeleleyo kuya kusanda kumanzi kwiibhodi, zikunika ezi Iimuvi ezilungileyo ezisekwe kwiincwadi kufuneka ubone ntoni.
1 UHarry Potter kunye nelitye lesithandi-sobulumko
2 Bulala iMockingbird
3 umbono okumGangatho Park
4 Ukuthula kwamatakane
5 Ubomi bukaPi
6 I-psycho yaseMelika
8 umke nogquthe
9 Ukuvalelwa ubomi entolongweni
10 Idayari kaBridget Jones
UHarry Potter kunye nelitye lesithandi-sobulumko
Ngo-Novemba ngo-2001, kungekudala ngaphambi kokufika kolunye uhlengahlengiso olukhulu olo INkosi yamasongo, Inguqulelo yefilimu yenoveli yokuqala yesaga yakhutshwa kwihlabathi liphelaHarry Potter, kanye xa ndigqiba incwadi. Ndikhumbula utata wam eyifunda, kwaye ngolunye usuku lonyaka omtsha saya kuyibona. Utata, umfundi owayefundile kwaye egcwele iishelufa zeencwadi, wandixelela ukuba le yenye ye olona hlengahlengiso Ndandibonile. Kwaye wayenyanisile. Kungenxa yokuba ngaphandle kokushiya inqaku elingenabungozi, i-cinema yokuqala yeHarry Potter yayisazi ukubamba phantse ngokugqibeleleyo indalo yeJKRowling: ukusuka kwi-Hogwarts yasentsomini ukuya kubadlali abancinci kwimeko yobabalo. Isavenge sokuqala silandelwe ngabanye, kunye ne-pluses kunye nee-minus zabo, nazo bezilungele ukulungiswa kwazo eyona franchise inkulu yoncwadi kule minyaka idlulileyo.
Kucingwa njengenye ye Iinoveli ezinkulu zenkulungwane yama-XNUMX, Bulala iMockingbird nguHarper Lee wayejongwa ngokufanelekileyo kwimiba enje ngobuhlanga okanye i-machismo ngokujija okupheleleyo kwiminyaka yoo-60. Umsebenzi wobugcisa owaqiniswa ngakumbi kukwenza ifilimu u-Robert Mulligan wakhululwa ngo-1960 UGregory Peck njengo-Atticus Finch, igqwetha elimhlophe elityholwe ngokukhusela umntu omnyama otyholwa ngokudlwengula. Ifilimu, impumelelo enkulu kwi-premiere yayo, yayinjalo Utyunjelwe ii-Oscars ezisi-8, ukuphumelela amabhaso oGqirha oGqwesileyo wePeck, iScreenplay eQhelekileyo kunye noKhokelo oluBalaseleyo lobuGcisa.
umbono okumGangatho Park
Nangona uSteven Spielberg edibanise abalinganiswa ababini kwinoveli kaMichael Chrichton odumileyo kwaye wangayinanza indawo encinci enxulumene nenye yeedinosaurs, akukho mntu unokuphika ukuba okwenzekileyo ngo-1993 kuya kutshintsha imbali yeemovie ngonaphakade. Ukoyama ngezinye andikaze ndizibone iziphumo ezizodwa Kwisikrini, ebizwa ngokuba ngu "King Midas" waseHollywood wakhutshwa ngeJurassic Park dynomania, waqokelela izigidi zeerandi kwaye watshintsha iziseko ze blockbuster Ixesha lasehlotyeni elifudukela e-Isla Nublar apho ukuzimisela komntu kukhokelele ekuvukeni kwe-T-Rex, i-velociraptor kunye nabanye abagxeki ababekhululekile ababangela uloyiko. Kubalulekile.
Ngaba ungathanda ukufunda IJurassic Park nguMichael Chrichton?
Ngo-1981 nango-1988, umbhali UThomas Harris wapapasha iRed Dragon kunye noKuthula kweeMvana ngokwahlukeneyo, yomibini imisebenzi ijolise kumlinganiswa we Isifundo sikaHannibal, ugqirha wezifo zengqondo onikwe utya abantu. Lowo ngokungathandabuzekiyo yenye ye abakhohlakeleyo kwiincwadi Utshintshelwe kumboniso bhanyabhanya kunye nomlingisi ofanayo kwifilimu ka-1991 no-Anthony Hopkins kwindima kaLecter noJodie Foster njengearhente ye-FBI uCarlice Starling, onoxanduva lokulandela umkhondo wombulali obizwa ngokuba nguBuffalo Bill ngomsebenzi wakhe axhomekeke kuwo. 5 Ophumelele uOscar, Ukuthula kwamatakane iyaqhubeka ukuba yenye ye kufuneka-ube neetheyiphu ezivela kwi-90s kubathandi be cinema elungileyo.
Iifilimu ezininzi zinakho ukuthembeka kumabali ezisekwe kuwo, kwaye zona, zizisa ubuntu bazo kuseti. Oku bekunjalo nge Ubomi bukaPi, ukulungiswa kwencwadi nguCanada Yann Martel Inkulumbuso ngowama-2012. UPi kunye noTiger Richard Parker ukukhwela esikhepheni kuxhomekeke kwiziphumo ezizodwa ezivuselele iminenga ephaphazelayo kunye nolwandle oluqaqambileyo. Kwakungelo xesha ke, okomzuzwana, uninzi lwethu olwajonga ukuba ingaba sijonge umboniso bhanyabhanya ongcono kunencwadi ephefumlelwe yiyo.
Iziqhamo zongxowankulu kunye noluntu oluthandayo, inoveli Yengqondo yaseMerika ngu-Bret Easton Ellis opapashwe ngo-1991 wagunyaziswa ukuba abonise yhupi psychopath odibanisa umsebenzi wakhe njengosomashishini waseNew York onamandla emini kunye nobusuku obuhlanyayo obuphela egazini nokumemeza. Umsebenzi oguqulweyo ngonyaka ka-2000 awusebenzelanga kuphela ukuphakamisa ubuhle UChristian Bale njengoPatrick Bateman, kodwa ukusilumkisa ngengozi yoluntu apho unqulo lomzimba, ukuthenga abathengi kunye namandla kudala indawo engenanto yokugcwalisa kwayo kungakhokelela kwezona zisombululo zinobungozi.
Kucingelwa ngabaninzi ukuba ube yenye ye ezona khasethi zintle ngalo lonke ixesha, The Godfather nguFrancis Ford Coppola, esekwe kwinoveli engaziwayo nguMario Puzo kwaye yakhululwa ngo-1972, kwafika ukuba kusazise usapho Italian-American imigulukudu evela iiCorleones, eyakhiwe ikakhulu ngeVito edlalwa ngu UMarlon Brando kunye nonyana wakhe uMichael phantsi kolusu lukaAl Pacino. I-X-ray yamashumi athile eminyaka engama-40 no-50 ephawulwe ngumsebenzi we-mafia woNxweme lwaseMpuma e-United States, itheyiphu 3 Ophumelele uOscar Ndivelise icandelo lesibini eliqwalaselwe ngabaninzi nangaphezulu kunangaphambili, kwaye eyesithathu yakhutshwa ngo-1990. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye Iimuvi ezilungileyo kakhulu ezisekwe kwiincwadi zalo lonke ixesha.
Awukafundanga NguThixo lo mfo?
Nangona kule mihla uhlengahlengiso lwefilimu esekwe ezincwadini zezona ziphindaphindayo, phaya kwi-30s le yayiyeyona nto ibalaseleyo. Mhlawumbi eso yayisesona sizathu sokudibanisa ukupapashwa kwencwadi yempumelelo njengaleyo umbhali ayibhalileyo Margaret Mitchell epapashwe ngo-1936 kunye Hollywood blockbuster ka-1939 wenza igama «umke nogquthe«Uya kutshayela. Imuvi, Ibhaso le-Oscars eli-Winning Starring Clark Gable kunye no-Vivien Leigh, ubalisa ibali losozigidi osemazantsi waseMelika kunye ne-odyssey yakhe yokuqhubela phambili ngeentsuku zeMfazwe yamakhaya yaseMelika.
Ukuvalelwa ubomi entolongweni
Ngokusekwe kwinoveli emfutshane URita Haywoth kunye nenkululeko yeShawshank ifakiwe kudityaniso AmaXesha amane oNyaka ngu-Stephen King, uCadena Perpetua wakhululwa ngo-1994 kwangoko iklasikhi evela kwi-90s cinema. Kudlala umlinganiso UTim Robbins, Ifilimu ibalisa ngesigwebo sobomi sombhanki otyholwa ngokubulala inkosikazi yakhe kunye nentombi yakhe kwaye esithi akanatyala. Uhambo lobomi betrongo apho, wakuba nje ungene, akukho nto iyafana kwakhona.
Idayari kaBridget Jones
Ngasekupheleni kweminyaka yama-90, iliza lobufazi lathatha umhlaba ngohlobo lwezinto ezinje ngesondo kunye neSixeko okanye iincwadi ezinje Idayari kaBridget Jones de UHelen uya ebaleni. Ukugxila ekutyebeni kakhulu ngamashumi amathathu ananye kwaye ngelishwa unamadoda, inoveli yahlengahlengiswa ngo-2001 kunye URenée Zellweger njengomlinganiswa ophambili kunye UColin Firth kunye noHugh Grant njengabathandi bomgqatswa woku uhlengahlengiso lwala maxesha lwekratshi kunye nokuCalucalula ibhokisi yabo impumelelo yeofisi yazala ezimbini ezincinci kodwa ngokuzibandakanya ngokulinganayo.
Zithini, ngokoluvo lwakho, zezona bhanyabhanya zibalaseleyo zisekwe ezincwadini?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iimuvi eziphambili ezisekwe kwiincwadi